नेपालमा पूल निर्माण कार्य, समस्या र समाधानका उपायहरु-Setoghar
नेपालमा पूल निर्माण कार्य, समस्या र समाधानका उपायहरु
ई.उमेश प्रसाद चौधरी, प्रबन्ध निर्देशक, युनिक इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रा.लि.
युनिक इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रा.लि. नेपालमा सडक तथा पुलहरु लगायतका पूर्वाधारको क्षेत्रमा लामो समय देखि काम गर्दे आएको कम्पनी हो । यस कम्पनीले हाल सम्म यस कम्पनीले नेपालमा एक हजार भन्दा बढी सङ्ख्यामा पुलहरुको अध्ययन तथा डिजाइन गरिसकेको छ भने नेपालका थुप्रै ठूला महत्वाकांक्षी सडक आयोजनाहरुको अध्ययन, डिजाइन तथा अनुगमन लगायतका कामहरु पनि गरेको छ । यस कम्पनीबाट अध्ययन र डिजाइन भएका सडक तथा पुल लगायत सबै पूर्वाधारहरु गुणस्तरीय छन् । यसो हुनुमा आफुले अध्ययन तथा डिजाइनको निम्ति अघी बढाएका आयोजनालाई दृढताको साथ सम्पन्न गर्न तयार हुनु नै मुख्य कारण रहेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक उमेश प्रसाद चौधरी बताउनुहुन्छ ।
ईन्जिनियर चौधरी इन्जिनियरिङ परामर्शदाताको रुपमा वि.सं २०६३ देखि काम गर्दै आउनुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । ऊहाँका अनुसार यो क्षेत्र हाल विगतको तुलनामा निकै नै व्यवस्थित बन्दै गएको छ । साथै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित इन्जिनियरिङ क्षेत्रले समेत निकै नै महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । विगतमा सडक तथा पुल क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन प्रयाप्त नीतिगत व्यवस्था समेत नभएकोमा अहिले नीतिगत व्यवस्था मार्फत राज्यले पनि पूर्वाधार क्षेत्रलाई योजनावद्ध रुपमा अघी बढाएको छ ।
नेपालको सडक निर्माण कार्यलाई नजिकबाट अध्ययन गर्नुभएका यस कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक ई. उमेश प्रसाद चौधरी सडक निर्माण गर्ने कार्यमा राज्य पक्षबाट गुणस्तरीयता बारे अध्ययन तथा सुपरिवेक्षणको लागि प्रयाप्त जनशक्ति उपलब्ध हुन नसकेको कारण यस क्षेत्रले तुलनात्मक रुपमा राम्रो प्रगति गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ । ऊहाँका अनुसार नेपालमा कुनै पुर्वाधार निर्माण कार्य व्यवस्थित बन्न नसक्नुमा निर्माण व्यवसायी लगायत परामर्शदाता र नीतिनिर्माण तह लगायत यस क्षेत्रमा संलग्न सबै पक्षको केही न केही कमजोरी छ । खासगरी निर्माण व्यवसायी बीचको उच्च अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा, राज्य पक्ष सँग प्रयाप्त जनशक्ति उपलब्ध हुन नसक्नु लगायत थुप्रै पक्षहरुको यसमा केही न केही कमजोरी छ । खासगरी निर्माण व्यवसायीले ३० देखि ३५ प्रतिशत सम्म लो बिलिङमा काम लिने गरेका छन् । यसले गर्दा निश्चित मापदण्ड बमोजिमको गुणस्तरीयता कायम गर्न समस्या सृजना हुनुलाई स्वभाविक मान्न सकिने चौधरीको धारणा छ । उनै अनुभवी व्यक्ति तथा युनिक इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक ईं. उमेश प्रसाद चौधरीसँग अहिलेको पुल क्षेत्रको अवस्था र यसमा देखिएका विविध समस्या र समाधानको विषयमा कुराकानी गरी तयार पारिएको एक सामाग्री यहाँ प्रकाशन गरिएको छ ।
गुणस्तरीयतामा विशेष जोड दिनुपर्छ
सडक निर्माण पश्चात् त्यसको गुणस्तरीयता कायम गर्न नेपाल सरकारले विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । सडकको गुणस्तरीय कायम राख्न सडक निर्माण गर्ने समयमा नै त्यसको निर्माण कसरी भएको छ, मापदण्ड पूरा गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरामा राम्रो तवरले अनुगमन र मूल्यांकन हुन सकेको खण्डमा यसको गुणस्तरीयता कायम गर्न निकै सहज हुन्छ ।
अहिले नेपाल सरकार मातहत निकायमा यसको गुणस्तरीयता अध्ययन गर्न प्रयाप्त जनशक्ति उपलब्ध नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले सोही बमोजिम प्रयाप्त जनशक्ति उपलब्ध गराई सोही बमोजिम सडकको गुणस्तरीयता कायम गर्न जोड दिनु जरुरी छ । साथै सडक निर्माण पश्चात् त्यसको गुणस्तरीयता ग्यारेन्टी समेत सोही कम्पनीले नै गर्ने व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा निर्माण क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय पुलहरुको निर्माण अवस्था
विगत केही दशक पहिले सम्म नेपालमा निकै कम सङ्ख्यामा मात्र पुलहरुको टेण्डर आह्वान हुने गर्दथ्यो । तर अहिले भने यो क्रम निकै नै बढेको छ । हाल नेपालमा २० मिटर देखि ५ सय मिटर सम्मका पुलहरु निर्माण भइरहेका छन् । साथै विगत केही बर्ष पहिले देखि नयाँ प्रविधिको प्रि स्टेस सिष्टमबाट पुलहरुको निर्माण कार्य समेत शुरु भएको छ । विश्वबजारमा यो प्रविधि निकै पहिले देखि नै सञ्चालनमा रहेको थियो । यद्यपि नेपालमा पुल निर्माण क्षेत्रमा प्रि–स्टेस सिष्टम लागु भएसँगै ठूला पुल निर्माण कार्यमा लागतमा निकै नै न्यूनीकरण आएको छ ।
नेपालमा पुलहरुको अध्ययन त थुप्रै सङ्ख्यामा भएको छ । तर अध्ययन भएका सबै पुलहरु निर्माण प्रक्रियामा जान भने सकेका छैनन् । यसो हुनुमा कतिपय अध्ययन भएका योजनामा नै पर्न नसक्नुु हो भने कतिपय निर्माणको क्रममा उत्पन्न हुने विभिन्न जटिलताहरु समेत छन् । अध्ययन पश्चात् डिजाइन फेजमा पुगेका आयोजनाहरु रेड बुकमा समेत लिस्टिङ हुन सकेको खण्डमा मात्र ती पुलहरुको निर्माण प्रक्रिया अघी बढाइन्छ । यद्यपि अहिले डिजाइन पश्चात पुल टेण्डरमा जाने अवधि भने घटेको छ ।
विगतमा पुल निर्माण अभ्यास
प्रि–स्टेस प्रविधि बमोजिम पुल निर्माण गरिनु भन्दा पहिले आरसिसि प्रविधिमा आधारित रही पुल निर्माण कार्य हुँदै आएको छ । प्रि–स्टेस सिस्टमबाट पुल निर्माण गर्दा २०–२५ मिटरमा स्पान राख्नुपर्नेमा त्यसरी नराखी पुलको लम्बाइ अनुसार १ सय मिटरको दूरीमा मात्र स्पान राख्न सकिने अवस्था सृजना भएको छ ।
पुलहरुको अध्ययन सँगै निर्माण हुने अवस्था
नेपालमा पुलहरुको अध्ययन त थुप्रै सङ्ख्यामा भएको छ । तर अध्ययन भएका सबै पुलहरु निर्माण प्रक्रियामा जान भने सकेका छैनन् । यसो हुनुमा कतिपय अध्ययन भएका योजनामा नै पर्न नसक्नुु हो भने कतिपय निर्माणको क्रममा उत्पन्न हुने विभिन्न जटिलताहरु समेत छन् । अध्ययन पश्चात् डिजाइन फेजमा पुगेका आयोजनाहरु रेड बुकमा समेत लिस्टिङ हुन सकेको खण्डमा मात्र ती पुलहरुको निर्माण प्रक्रिया अघी बढाइन्छ । यद्यपि अहिले डिजाइन पश्चात पुल टेण्डरमा जाने अवधि भने घटेको छ । पछिल्ला बर्षहरुमा राम्रो तवरले अध्ययन भएका अधिकांश पुलहरु छोटो अवधिमा नै निर्माण प्रक्रियामा गइरहेका छन् ।
पुल निर्माणको क्रममा देखिएका समस्याहरु
नेपालमा अहिले सडक, पुल लगायतका विभिन्न योजनाहरु सम्पन्न गर्ने क्रममा कतिपय अवस्थामा आयोजनाको नाम नै फरक पर्ने र निर्माणमा द्विविधा उत्पन्न हुने अवस्था छ । साथै कतिपय कामहरु अघी बढाउने क्रममा राज्यका निकायहरु बीच आपसी समन्वयनको समेत अभाव रहँदै आएको छ । यस्ता कुरामा विवचार गर्दै आगामी दिनमा यस्ता कुराहरुमा सुधार गर्नु जरुरी छ ।
पुल अध्ययनको लागि लाग्ने समय –
सामान्यतया कुनै पुलको अध्ययन गर्न करिब ६ महिना लाग्ने गर्छ । तर नेपालमा अहिलेका नीतिगत तथा अन्य विविध कठिनाईको कारण कुनै आयोजना अघी बढाउँदा निर्धारित समयमा ती योजना पूरा गर्न सकिने अवस्था छैन ।
पुर्वाधार निर्माणमा जनशक्तिको अवस्था
नेपालमा अहिलेको अवस्थामा पुलको निम्ति काम गर्ने विज्ञ जनशक्ति निकै नै कम सङ्ख्यामा उपलब्ध छन् । साथै नेपालमा ठूला आयोजनाहरु निर्माण गर्ने क्रममा बाह्य मुलुकबाट परामर्शदाता समेत झिकाउने गरिएको छ । यसबाट नेपाली इन्जिनियरहरुलाई समेत नयाँ अत्याधुनिक प्रविधिको बारेमा ज्ञान हासिल गर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
योजनालाई व्यवस्थित गर्न जिम्मेवार पक्षहरु
कुनै पनि योजना सम्पन्न गर्ने क्रममा संलग्न ३ ओटै पक्षबीच आपसी समन्वय हुनु जरुरी रहन्छ । कतिपय अवस्थामा कुनै आयोजना निर्माणको क्रममा संलग्न पक्षहरुबीच राम्रो समन्वय हुन नसकेको कारण समेत समस्या सृजना हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कुन कमजोरी कुन पक्षबाट भएको कमजोरीबाट सृजना भएको हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दै सोही बमोजिम ती समस्या समाधानार्थ अघी बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
पुल डिजाइनमा समस्या छैन
सडक, पुल लगायतका कुनै पनि आयोजना अघी बढाउने क्रममा त्यसलाई कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विशेष भूमिका त निर्माण व्यवसायीकै हुने गर्छ । नेपालमा निर्माणार्थ अघी बढाइएका पुलहरु डिजाइनको कारणले असफल भएका छैनन् । निर्माण क्रममा कुनै समस्या आएको खण्डमा पूरै प्रोजेक्ट नै प्रभावित हुन सक्ने कुरामा सतर्क रहँदै २–३ प्रतिशत सेफ्टी फ्याक्टर समेत रहने छुट्याइने हुनाले कुनै समस्या आएको खण्डमा पनि सहज रुपमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।
पुल निर्माणका अन्य समस्या
कुनै ठूलो दैवी प्रकोपको कारण राम्रो तवरले निर्माण भएका पुलहरुमा समेत कहिलेकाहीँ क्षति पुग्न सक्छ । खासगरी पुल आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा निर्माण व्यवसायीले आवश्यक गहिराई कायम नगरेको समेत पाइन्छ । कम लागत र आफ्नो मात्र अनुकुलतालाई विचार गरेर निर्माण गरिएका यस्ता आयोजनाहरुमा समस्या आउन सक्नु स्वभाविक लिन सकिन्छ । पुल निर्माण गर्दा आगामी दिनमा यस्ता विविध पक्षलाई विचार गरेर सोही बमोजिम काम अघी बढाउनु जरुरी छ । पुल निर्माणको लागि जग तयार गर्ने क्रममा त्यसलाई कति गहिराइमा खनिएको छ भन्ने कुरा अहिले लेजर लाइटबाट सजिलै जानकारी पाउन सकिन्छ । यदि २० मिटरको पाइप फाउण्डेसन निर्माण गर्नुपरेमा निर्माण व्यवसायीले १५ मिटर कायम गरेको रहेछ भने त्यसबाट आउन सक्ने सम्भावित दुर्घटनालाई लक्षित गर्दै पुर्ण सुरक्षित बनाउन निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । कुनै पनि आयोजना निर्माणको क्रममा राम्रो तवरले काम भएको छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्ने उद्धेश्यले नै तेस्रो पक्षको व्यवस्था गरिन्छ । तेस्रो पक्षको समेत भुमिका निकै महत्वपुर्ण रहन्छ ।